अनलाइन / पत्रपत्रिकाबाट – Page4– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
आज बाट एसइई परीक्षा शुरु, ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुदै
काठमाडौं १० चैत - यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई) परीक्षा आज बाट शुरु हुंदैछ । परीक्षामा धादिङ लगायत देशभरबाट ४ लाख ७५ हजार ३ जना परीक्षार्थी सामेल हुने भएका छन ।ति मध्ये धादिङ जिल्लाका ५ हजार ८ सय ८५ जना बिद्यार्थीले परीक्षा दिंदैछन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्ष..
काठमाडौं । महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढेकोे छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को ७ महीना (साउनदेखि माघसम्म)मा अघिल्लो आव २०७३/७४ को सोही अवधिको तुलनामा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । आव २०७३/७४ को साउनदेखि माघसम्म ७५ हजार ५ सय १३ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थियो । त्यस्तै, चालू आवको सोही अवधिमा ७९ हजार ४..
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधन भएको छ । नेकपाका नेताा अधिकारीको ८२ वर्षको उमेरमा शनिबार राति ९ बजेर ३५ मिनेटमा ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको हो । लामो समयदेखि बिरामी अस्वस्थ अधिकारीलाई गत पुस २३ गतेदेखि ललितपुरको मेडिसिटी र त्यसपछि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अधिकारीको निधन भएको खबर..
काठमाडौं । राजधानीको ह्याम्स अस्पतालमा उपाचारत पूर्व उपप्रधान तथा पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था आशा मार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको उपचारमा खटिएका चिकित्सकले बताएका छन्। नेता अधिकारीको पछिल्लो स्वास्थ्य अबस्थाबारे जानकारी गराउन अस्पतालले शनिबार अपरान्ह गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । पत्रकार..
शान्त सुशील पत्रकार भएँ भन्दैमा मनपरी लेख्न पाइँदैन । फूटबल खेलाडिले बाटोमा मानिसहरुलाई लात्ताले हान्दै हिँड्न मिल्छ ? गायक भएँ भन्दैमा तथानाम गाली गरेको गीत गाउन मिल्छ ? मिल्दैन । गायक पशुपति शर्माले आमाचकारी गाली गरेको गीत बजारमा ल्याएछन् । उनले राष्ट्रपति संस्थालाई मनपरी आरोप लगाएका छन् । उनले राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई..
धादिङ, ५ माघ - धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेसीमा आईतबार देखि जिल्ला स्तरीय डण्डीवियो प्रतियोगिता खेल शुरु भएको छ । खेलको पहिलो दिन तीन खेल सम्पन्न भएको छ । पहिलो दिनको खेलमा लापा मावि , सुनौलो भैरबी मावि, साङकोष मावि विजयी भएका छन । लापा मावि र मनरुपी मावि बिच भएको खेलमा लापाले २ सय २९ र साङकोषले १ सय ८९ अंक प्राप्त गरेको थियो भने सुनौला..
थांक्रे-धादिङको थांक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ६ महादेबवेसीमा रहेको जनजागृती माध्यमिक बिद्यालयलाई प्राबिधिक बिद्यालयको रुपमा स्थापना गरिने भएको छ । प्राविधिक बिद्यालय स्थापना गरि संचालनको लागि थाक्रे गाउपालिकाको कार्यपालिकाले अनुमति दिएको छ । गाउँकार्यपालिकाको फागुन ३ गते बसेको बैठकले शैक्षिक सत्र २०७६ बाट प्राविधिक बिद्यालय..
धुनिवेसी – समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउन फागुन १ गते बुधवार ईलाका प्रहरी कार्यालय खानिखोलामा सरोकारवालाहरुका बिच को छलफल तथा अन्त्रक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको उद्धेश्य तथा कार्य–प्रणालीका बिषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा धुनिवेशी..